window7တင်နည်း (မြန်မာလို) ~ မိုးညိုသား
3:55 AM နည်းပညာ စာအုပ်များ No comments
အခုနောက်ဆုံး နာမည်ကြီးနေတာကတော့ window7ပါ . ကိုယ်တိုင် window တင်ချင်သူများ. လက်တည့်စမ်းလို့ရပါတယ် . သိပ်မခက်ပါဘူး . ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာကို ရေးပေးထားပါတယ် . အဆင်ပြေပါဗျာ
မှတ်ချက်။ လယ်တီမြေသား ကနေယူလာတာပါ
Download ifile.it | zshare | Megaupload| ziddu | Megaupload